Nkwupụta na ekpere nye St. John Paul II maka amara
Akwụkwọ nsọ JOHN PAUL II
Wadowice, Krakow, Mee 18, 1920 - Vatican, Eprel 2, 2005 (Pope site na 22/10/1978 ruo 02/04/2005).
Amụrụ na Wadovice, Poland, ọ bụ pope Slavic mbụ na popu mbụ na-abụghị onye Italy kemgbe oge Hadrian nke Isii. Na May 13, 1981, na St. Peter's Square, ụbọchị ncheta nke mbido mbụ nke Nwanyị Nwanyị anyị nke Fatima, onye Turkish Alì Agca merụrụ ya ezigbo ahụ. Mkparịta ụka dị iche iche nke okpukpe na nke okpukpe, ịgbachitere udo, na ịkwanyere mmadụ ùgwù bụ mkpebi nke ozi ndịozi na nke ịzụ atụrụ ya kwa ụbọchị. Mmasị ya maka Oziọma na nnwere onwe nke ndị mmadụ na-apụta site n'ọtụtụ njem ọ na-aga na kọntinent ise. N'ebe niile ozi, na-etinye liturgies, mmegharị a na-agaghị echefu echefu: site na nzukọ na Assisi na ndị isi okpukpe si n'akụkụ ụwa niile gaa n'ekpere na Wailing Wailing na Jerusalem. Egburu ya na Rome na May 1, 2011.
Ekpere iji gosipụta ihe ndị a na-amasị site na nnabata nke JOHN PAUL II, POPE
O Nsọ Atọ n’Ime Otu, anyị na-ekele gị maka ịnyeworo John Paul II nke a gọziri agọzi na Chọọchị ahụ ma mee ka ịdị nro nke nna gị, ebube nke Obe Kraịst na ịma mma nke Mmụọ nke ịhụnanya na-enwu n’ime ya. Ya onwe ya tukwasiri obi na obi ebere gi nke di nfe na nne nke Meri nyere ayi nkpuru obi di ndu nke JisosOnye aturu oma ma gosi ayi idi nso dika ndu ndi kristain dika uzo eji esoro gi na nmekorita ebighebi. Nye anyị, site n’arịrịọ ya, dịka uche gị si dị, amara nke anyị na-arịọ, n’olileanya na a ga-agụta ya n’etiti ndị nsọ gị n’isi nso. Amen.
EKPERE JOHN PAUL II
O nna anyị anyị hụrụ n’anya John Paul II, nyere anyị aka ị hụ Nzukọ-nsọ ​​n’anya otu ọ joyụ na oke ike ị hụrụ ya n’anya na ndụ. Site n’omume nke ndu ndi Kraist nke inyegoro anyi site na iduzi theka di nso dika onye nochiri Peter, nye anyi anyi onwe anyi puru ime ka “totus tuus” anyi nye Mary onye gh’eme anyi jiri obi oma duru anyi rue na Okpara ya Jesus
EKPERE NKE IELE EKELE CHINEKE Onyinye JOHN PAUL II
Anam ekene, Chukwu Nna, maka onyinye John Paul II. Ya "Atụla egwu: meghee ọnụ ụzọ Kraịst" meghere obi nke ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, na-akwatu mgbidi nke mpako, nzuzu na ụgha, nke na-atụnye ùgwù mmadụ. Dịkwa ka ụtụtụ, ozi ya emeela anyanwụ nke Eziokwu nke na-eme ka ọ pụọ n'okporo ụzọ ụmụ mmadụ. Ana m ekele gị, oh Mary, maka nwa gị John Paul II. Ike ya na obi ike ya, nke juputara n'ịhụnanya, bụ mgbagha nke '' ebe a ka m nọ ''. Site na imere onwe ya “ihe gi nile”, o mere onwe ya kpam kpam nke Chineke: nkpuputa nke ofhuru nke obi ebere nke Nna, ibi ndu nke enyi nke Jisos. Daalụ, ezigbo Nna di nso, maka ọgbụgba ama nke onye hụrụ Chineke n’anya nke inyeworo anyi: ihe nlere gi nenweta anyi site na nsogbu nke oru mmadu ka anyi bulie anyi elu nke nnwere onwe nke Chineke.
Nke gara aga Post Gara aga post:Iji Onwe Ha Eme Ihe: Jizọs kwuru okwu n’ekwughị okwu
Next Post → Post ozo:Kedụ ihe Pope Francis kwuru gbasara ndị ọrụ obodo?